Ofisialy io, hampiasa XFCE i Debian ho tontolon'ny birao | Avy amin'ny Linux
Ofisialy io, hampiasa XFCE i Debian ho tontolon'ny birao mahazatra
Ya Elav naneho hevitra Ity lahatsoratra ity, saingy "angamba" fotsiny izy io, ankehitriny dia ofisialy ary faritan'izy ireo amin'ny fanekena izany Eto.
Ny tena anton'izany dia… tsara, mazava ho azy: maivana.
Tokony hatao GNOME nanjary sarotra loatra ny nahatonga ny distro hifanaraka amin'ny CD, ary izany dia zavatra miteraka sakana ara-psikolojika, na ho an'ny mpampiasa tsotra na ho an'ny mpamorona hatrizay, raha ametrahana azy amin'ny teny tsotra dia "mandeha".
Na izany na tsy izany dia tsy zava-dehibe ny manoratra an-trano, raha ny tena izy mpampiasa maro ny Debian no mampiasa azy XFCE o LXDE, ka tsy ho fiovana mahery vaika ary hijanona ho safidy mety ho an'ny olona maro; raha ny marina dia mety hanova ny crunchbang-ko amin'ny Netbook ho an'i Debian Wheeze, iza no mahalala.
Na eo aza izany, sombim-baovao tsy misy manapaka, mihoatra ny hevitra hafa rehetra, ny fantatra dia izao dia manomboka miaraka amin'ny XFCE i Debian, tsara ho antsika izay mampiasa ity tontolon'ny birao ity. 😀
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » GNU / Linux » Ofisialy io, hampiasa XFCE i Debian ho tontolon'ny birao mahazatra
Tena mahomby ny debian dia tsara kokoa noho izao, satria ny xfce dia milamina kokoa toy ny lxde ary lazaiko anao fa ao amin'ny sampana fitiliana aho, tena tsy tiako intsony ny gnome izao dia aleoko ireto tontolo ireto:
Vaovao mahafaly izany satria mety hampihoron-koditra tokoa ny mahita tranon'omby debian miaraka am-borona na gnome 3.
Manantena aho fa hanao toy izany koa ny distros hafa, andao hojerentsika raha manokatra ny mason'izy ireo indray mandeha ny mpamorona GNOME hahatsapa fa misy zavatra (fa be dia be!) Tsy mety.
Ny zavatra amin'ity rehetra ity dia sarotra izany. Ny GNOME dia tsy mahalala izay tokony hatao amin'ny tenany ary mandehandeha ary manatratra ireo zavatra tsy tokony hikasihany na raha tsy maintsy manontany azy ireo aloha. Io tarehy hafahafa natao io sy ny fiarovana ny fahafatesan'ny foto-kevitra iray izay tsy mandeha amin'ny sehatra birao dia vao mainka hanimba azy ireo.
Nifanena tamina mpisolovava GNOME aho, saingy toy ny fanboy mpankafy izay tsy mahatsapa fa na dia zon'izy ireo aza ny mampiasa izay tiany, tsy midika izany fa marina izy ireo satria tiany izany.
Hamboarina amin'ny 4.0 ve izy ireo? Somary manahirana ihany izany, ankehitriny te hiditra amin'ny tontolon'ny finday izy ireo, nanambara izy ireo, te hiasa amin'ny OS finday saingy ... Tsy nilaza ve izy ireo fa tsy manana mpiasa? Ny tsy fananan'izy ireo avaratra na tanjona hafa ankoatry ny fanaovana "fampiharana lehibe"? Tsy haiko, izany rehetra izany dia miteraka lahatsoratra lava be. Raha ny tena izy tsy haiko izay hevitrao fa mifandraisa amiko ary andao hanoratra zavatra xD
Toa fanapahan-kevitra tsara ho ahy. Ny fandinihana indrindra fa ny XFCE, ankoatry ny maivana dia azo ovaina tanteraka. Fanamarihana ratsy iray hafa ho an'ireo bandy ao Gnome.
Heveriko fa fanapahan-kevitra feno fahendrena io, na dia aleoko aza ny KDE, nampiasa ny GNOME aho teo aloha saingy tsy maintsy milaza aho fa najanoko ny fitiavako azy hatramin'ny namoahana ny kinova fahatelo. XFCE no tontolon'ny birao ankafiziko faharoa, tsara ho azy ireo ary tsara ho an'i Debian amin'ny fanapaha-kevitra.
Herinandro lasa izay dia nanapa-kevitra ny hiala amin'ny mari-pahaizana mankany amin'ny fanandramana aho (rehefa afaka herintaona mahery) ary nanapa-kevitra toy izany koa aho, nanova gnome ho an'ny xfce ary ny antony dia io, hazavana ... ary tokony hiaiky aho fa tena faly amin'izany. manova ... mora, tsotra, azo alamina ary tena haingana.
Omena ny fankatoavana sy ny sata mendrika XFCE izy io.
Mamaly an'i Pipe
Fanapahan-kevitra lojika sy antenaina tanteraka. Raha ny fahitako azy dia very ny avaratra i Gnome (ary ny tabataba miakatra ao amin'i Nautilus), na dia nanana epifania mamorona ihany koa izy ireo ary tafavoaka ihany. Amin'izao fotoana izao dia aleoko tontolo iainana "lany andro, tsy azo ampiasaina ary tsy tonta". Hafahafa aho, fantatro.
Raha ny fahitako azy dia fanapahan-kevitra hendry sy raisina ity…. Misaotra anao tamin'ny fanamafisana.
Maty i Gnome, ela velona i Xfce ...
Heveriko fa tsy liana ny ekipan'ny Gnome, zavatra hafa no idiran'izy ireo, na dia eo aza ny zava-misy fa maro ireo mpampiasa no nifindra tamin'ny tontolon'ny birao hafa dia mijanona ho matanjaka amin'ny politikany izy ireo. Ny fotoana no hilaza hoe iza no marina.
Raha izaho manokana dia mahazo aina amin'ny XFCE aho noho ny fanaingoana azy sy ny fahazavana ao aminy fa misy zavatra tsy azoko momba ny Gnome 2 toy ny mety hanovana ny fiaviana Nautilus ho an'ny sary iray, ny fanovana ireo kisary fampirimana araka ny sitrapony sy ny mety hanampiana marika fanampiny. amin'ny lisitra. Ny marina dia efa nanandrana ny Gnome 3 aho fa hitako fa ahazoana aina kokoa ny mampiasa takelaka noho ny amin'ny birao (ankehitriny rehefa mieritreritra azy aho, dia toy ny nahatsapa ny tanjon'ity fanovana ity i Microsoft ary izany no antony ny fanavaozana ny fampifandraisany amin'ny Metro dia heveriko fa nahatonga azy ireo nanome aingam-panahy satria mampiasa ny interpricre SUSE ary raha ny fahalalako ireo SUSE dia miloka amin'ny Gnome 3 hatramin'ny nivoahany).
Ok, izao no sisa tavela dia ny fahitana ny hafirian'ny olona te-hametraka debian miaraka amin'ny tontolo misy sary, avy amin'ny CD ary tsy fametrahana fametrahana net-install izany.
Heveriko fa ivelan'ny olan'ny habakabaka ny mampiditra sary miaraka amin'i Gnome amin'ny cd, ny antony lalina indrindra amin'ny fanapahan-kevitra noraisin'ny ekipa Debian dia ny fitoniana tadiavin'ny kinova fampiasa. Miova be ny Gnome (na ho tsara na ho ratsy, misy hevitra tsy mitovy), noho izany, ho an'ny kinova Debian azo antoka misy zavatra azo antoka kokoa toy ny XFCE dia tsara kokoa.
Na izany na tsy izany, tsy ny fametrahana toerana misy anao intsony; ny mpampiasa tsirairay, amin'ny farany, mametraka ny birao tadiaviny.
Fanapahan-kevitra tsara avy amin'i Debian, antenaina ary hanokatra ny mason'izy ireo haingana i Gnome.
fanapahan-kevitra lehibe. XFCE dia safidy tsara, indrindra ny kinova 4.10, izay efa nanandramako tokoa ary mandeha tsara. raha ny momba an'i Gnome, mampalahelo izay toa mitranga, tsy misy fitarihana. Manantena aho fa hihatsara ny toe-javatra.
Mampalahelo tokoa fa ny tontolon'ny Desktop izay be mpampiasa indrindra dia tonga tamin'io fotoana io. Fa izy ireo ihany no nandavaka ny fasany, mba hijerena izay hoavin'ity tetikasa ity, tena sarotra aminy izany.
Ny tokony ho nataon'izy ireo dia ny kinova Gnome roa, ny maivana na ny taloha ary ny ankehitriny, samy mampiasa ny tranomboky iray ihany araka izay azo atao (ilay maoderina mazava ho azy fa tokony hampiasa bebe kokoa)
Saingy tsy dia ratsy loatra ny zava-misy ankehitriny, rehefa mampiasa olona maro kokoa i Xfce na Xubuntu dia hanome fanampiana bebe kokoa amin'ny birao ary maro ny olona handefa lesoka avy amin'izany ary maro ny olona hamaha azy ireo amin'ny bilaogy.
vaovao tsara ho an'ny birao tiako (satria tsy toy ny taloha ny gnome), angamba hanafaingana ny fizotran'ny fampandrosoana xfce :)
4.10 nitombo be na dia tsy nahavita nampiditra ireo fanovana nomanina rehetra aza.
Xfce no safidiko faharoa amin'izao fotoana izao, saingy rehefa mivoatra ny kanelina dia tsy manana ahiahy aho fa raha vao mahatratra teboka azo ampiasaina sy antonony feno dia mpifaninana lehibe.
Tsy maintsy miandry ianao vao hahita izay mitranga. Ao amin'ny pejy fampidinana Debian, Wheezy beta 1 dia mbola misy cd 1 miaraka amin'ny gnome, ilay cd izay niavian'i xfce sy lxde, dia iray hafa. Afaka miova ho an'ny beta 2 ve ity?
Tiako ny XFCE, haingana izy io, saingy ... tsy mamela firindrana birao firy sns ... toy ny gnome
Efa hitanao io fanovana io efa elaela izay. Gnome 3 dia azo antoka fa nandiso fanantenana lehibe hatramin'ny nivoahany.
Tonga ny fotoana tsara kokoa ho an'ireo mpankafy ny totozy 🙂 !!!
2 dia hoy izy:
tena saribakoly izany .. voalohany tokony ho nanao zavatra hifampidinihana tamin'ny vondrom-piarahamonina izy ireo (satria heverina ho vondrom-piarahamonina) fa tsy nanao .. nitory izy ireo fa vondrom-piarahamonina nefa tsy mampihatra.
Hanova distro aho
Valio ny 2
mc5 dia hoy izy:
Tsy azoko loatra ny foto-kevitry ny maivana na ny vesatry ny tontolon'ny birao.
Miorina amin'ny inona ny mason-tsivana iorenany? Toa tany amin'ny valopolo taona na tany am-piandohan'ny sivifolo taona isika raha tsy nanana ny fahaizan'ny computer ankehitriny.
Raha manana 4 na 6 aho ary ny ondrilahy rehetra tadiaviko dia ny zavatra farany eritreretiko dia ny halehiben'ny tontolo desktop. Raha tsy miresaka momba ny milina talohan'ny 2003. Ny masinako dia avy amin'ny 2006 ary miaraka amin'ny ondrilahy 4 gb dia efa nanandrana saika ny tontolon'ny birao rehetra aho nefa tsy nisy olana momba ny fampisehoana.
Heveriko fa raharaha manokana kokoa izany, amin'ny fomba fisafidianana ny rafitra miasa hifanaraka amin'ny filantsika, dia toy izany koa no atao amin'ny tontolon'ny birao, resaka tsiro sy filàna.
Xfce dia tontolo iainana mahavariana, mahavariana amin'izany na amin'ny lafiny hafa, saingy mbola birao hafa ihany io, ao anatin'ny karazany maro izay arosony maimaimpoana ho antsika.
Valiny amin'ny mc5
Vaovao mahafinaritra !!! Manodidina eto ho an'ny mpizara, ho an'ireo milina taloha (ary azo averina), ho an'ny milina virtoaly rehetra, mampiasa Debian Stable miaraka amin'ny XFCE izahay !! Farany default ny fametrahana Debian miaraka amin'ny XFCE.
Ny hany fitarainana amin'i Debian dia ny tsy maintsy ananan'izy ireo malefaka kokoa amin'ny fieritreretana mba hamelana ny fiaraha-mientana amin'ireo tetikasa toa ny Mate, Cinnamon na Trinity, fa azo apetraka avy amin'ireo repos ofisialy ireo birao ireo.
Ireo any Gnome dia tsy misy tanjona, nanomboka tamin'ny andro voalohany dia ny naka tahaka ny MS (Bonobo == OLE), ary raha mankany amin'ny tablette ny MS dia mankany amin'ny takelaka ihany koa ... Na izany aza ...
Pako Guerra Gonzálezp dia hoy izy:
Eny, toa mieritreritra aho fa hiverina any Debian rahateo.
Ity distro ity dia niasa tsara ho ahy ary bebe kokoa ankehitriny miaraka amin'ity birao maivana ity
Valiny tamin'i Pako Guerra Gonzálezp
tsaho debian 7 dia ho avy miaraka amin'ny gnome3 ho birao misy anao
Ity dia navoakan'i Stefano Zacchiroli avy amin'ny kaonty identi.ca azy @zack
http://ur1.ca/a22vo afaka mijanona ve ny olona milaza fa nanova ny tontolon'ny birao misy anao? Makà sary #Wheezy dia ho hitanao irery #kthxbye
Kitapo Icon vaovao ho an'ny Lubuntu 12.10
LibreOffice 3.6 misy!